News & CSR | IME International Co., Ltd.
“Triangle တာယာမှ Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားသော ကုန်တင်ကားယာဥ််််မောင်းများအတွက် သိန်း ၃၀ ကျပ် ထောက်ပံ့လှူဒါန်း”
“စာနာကမ်းလက်… လက်တွဲကူညီ … ဖေးမမည်။” “Triangle တာယာမှ Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားသော ကုန်တင်ကားယာဥ််််မောင်းများအတွက် သိန်း ၃၀ ကျပ် ထောက်ပံ့လှူဒါန်း” Triangle တာယာများကို တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်​​ဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေသော IME International Co., Ltd.
ယခုအချိန်ကာလက COVID-19 ကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်းလာနိုင်သည်ဟူသော ခံယူချက်ဖြင့် နေထိုင်သွားလာမှုမှစ သတိထားပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အချက်များကို လိုက်နာဖို့က အဓိကကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်… IME International Co., Ltd. ရှိ ဝန်ထမ်းမိသားစုများအား ယခုဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော
Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Mobile Swab Van များပြုလုပ် အသုံးပြုမည့်အစီအစဉ်အတွက် IME Foundation နှင့် IME International Co., Ltd. တို့မှအလှူငွေ ကျပ်သိန်း ၆၀ နှင့် FOTON Light Truck ၃ စီး ဌားရမ်းပေးခြင်းတို့အား We Love Yangon မှတဆင့် ၂၄.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Mobile Swab Van များပြုလုပ် အသုံးပြုမည့်အစီအစဉ်အတွက် IME Foundation နှင့် IME International Co., Ltd. တို့မှအလှူငွေ ကျပ်သိန်း ၆၀ နှင့်
“BAIC Group၊ FOTON Motor နှင့် IME International Co., Ltd. တို့မှ ပူးပေါင်းပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ Negative Pressure Ambulance ယာဉ် (၂)စီးပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း” ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ BAIC
”IME INTERNATIONAL CO., LTD. ၏ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအား ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံခြင်းနှင့် YTO၊ KIOTI အမှတ်တံဆိပ် ထွန်စက်များအား မိတ်ဆက်ပြသခြင်းအခမ်းအနား”
IME INTERNATIONAL CO., LTD. ၏ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအား ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံခြင်းနှင့် YTO၊ KIOTI အမှတ်တံဆိပ် ထွန်စက်များအား မိတ်ဆက်ပြသခြင်းအခမ်းအနား မှ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ
The 2nd Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation opened in Beijing on April 25, 2019. As the highest-standard
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး သြင်္ကန်အခါသမယမှ စတင်၍ မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေကြောင်း 𝑰𝑴𝑬 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒐., 𝑳𝒕𝒅. မှ
FOTON Hinthada Road Show
ကျွန်တော်များ IME International Co., Ltd. မှ တရားဝင်တင်သွင်းဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး FOTON အမှတ်တံဆိပ် Light Duty Truck များနှင့် GRATOUR V55 ကားများ မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံကုန်သေတ္တာတင်မော်တော်ယာဉ်များအသင်း(MCTA)၏ ဆဌမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်အသင်းသား စုံညီအစည်းအဝေး
ရန်ကုန်မြို့ Sky Star Hotel ၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံကုန်သေတ္တာတင်မော်တော်ယာဉ်များအသင်း(MCTA)၏ ဆဌမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်အသင်းသား စုံညီအစည်းအဝေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး FOTON အမှတ်တံဆိပ် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များအား တရားဝင်တင်သွင်းဖြန့်ချိလျက်ရှိသည့် ကျွန်တော်များ
FOTON MONYWA ROAD SHOW
ကျွန်တော်များ IME International Co., Ltd. မှ တရားဝင်တင်သွင်းဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး FOTON အမှတ်တံဆိပ် Light Duty Truck များ မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃